Nirava tamin’ny 4 ora tolakandro izy io omaly, izay mianatra ao amin’ny sekoly Le Petit Nid Anjanahary, kanefa dia tsy nody tany an-tranony eny Nanisana.Tsy mbola fantatra mazava hoe inona marina no nitranga hatry ny halina nanoratana ny vaovao.Miantso fiaraha-miasa ny fianakaviana amin’ny fikarohana an’i Cedrick ka nametraka ny laharana an-telefaonina 033 73 221 58 sy 039 17 044 31 mba antsoin’ireo izay manam-baovao
Nitifitra avy hatrany ny jiolahy tetsy Alasora. Izany dia mba entina hampitahorana ny tompon-trano izay hotafihana. Nahavita niantso vonjy anefa ireo ary koa niantso ny zandary izay soa ihany fa mba sendra nanao fisafoana teny amin’ny manodidina. Raikitra ny fifanenjehana tao anatin’ny haizina fa saingy tsy tratra intsony ireo jiolahy. Dikan’izany dia ilaina miparitaka mandehandeha ny mpitandro ny filaminana rehefa alina ny andro fa tsy miandry fotsiny baiko ao amin’ny birao.
MIHANTONA NY FAMPANDROSOANA
Kepoka tanteraka ny fitondràna ary azo hitarafana izany ny fahanginany tao anatin’ny tambajotra sosialy manoloana ny vavan’ny olona izay nahatsikaritra fa tsy mandeha amin’izay tokony hoizy ny IEM. Ny antoko mpanohitra rehetra anefa dia efa naneho ny fahavononany ny hanampy an’i Rajoelina raha toa izy ka manisaka tsikelikely ireo olona izay tsy mahomby eo amin’ny manodidina azy. Hatreto anefa toa tsy vitany mihitsy izany ary matahotra tanteraka sao hifototra any aminy ny fanisahana ireo tsy mahomby. Dia lasa mihantona eo ny fampandrosoana izay kasainy.
Olona roapolo mahery no indray narary vokatry ny fanapoizina ara-tsakafo. Tany Fenoarivo-Atsinanana no nitrangan’izany, tao amin’ny fokontany Tanambao. Notaterina ireo narary izay nisy koa ny tonga tsikelikely. Atsantsa izay azon’ny mpandriaka no namidy tao an-toerana ary nifandrombana mihitsy azy ny asabotsy teo. Hatramin’ny omaly dia mbola marobe ny olona izay tonga tao amin’ny hopitaly ary avy hatrany dia noraisina an-tànana. Tsy misy ahiana ny ain’ireo, raha araka ny fanamarihana azo avy any an-toerana.
Misy indray ny andro ratsy izay miforona ao amin’ny ranomasim-be indiana. Ahiana indray ny rotsak’orana be manomboka amin’ny alakamisy izao araka ny vinavina avy amin’ny sary navoakan’ny zanabolana eoropeanina. Ny fijerin’ny manam-pahaizana dia ahiana hitondra oram-be io tangoron-drahona izay hitarika andro ratsy io. Efa miomana ireo nosy rahavavy dia i Maurice sy La Réunion izany.
TE HAMETRAKA NY OLONY NY FITONDRANA
Hozongozonona tanteraka ny Holafitry ny mpanao gazety mba hanamoràna ny fametrahana olon’ny fitondràna azy. Amin’izao fotoana dia karohin’ny minisitera mpiahy ny hanovàna ny rafitra mpitantana dia ny hanasiana filoha lefitra isaky ny faritra izany. Ireo indray avy eo no hatao mifidy izay ho filoha. Terena ireo mpiasan’ny haino aman-jerim-panjakana any amin’ny faritra mba hangataka ny fanasiana ireo filoha lefitra ireo any aminy. Mihenjan-droa tanteraka ny tady eo amin’ny OJM sy ny MCC.
LANY BALA IREO MPANOHANA NY FITONDRANA ?
Fivoriam-be ny an’ny antoko mpomba ny fitondràna nanomboka ny alin’ny alahady. Izany dia taorian’ny fihenan-danja noho ny tsy fahaizan’ny olona izay nisolo tena ny fitondràna tao anaty adihevitra tamin’ny fahitalavitra rahavavy ny alin’ny alahady teo. Kepoka avokoa ary misy ny olo-be izay efa manomboka resy lahatra fa tsy misy intsony bala (hevitra) izay entina miaro izao fitondràna izao ankehitriny.
Voatifitra any Anjozorobe ny lehilahy iray izay tànana an-kavanan’i Botomena. Io farany ilay voatery nentina nitsoaka avy any Ambilobe rehefa namono sy nanolàna vehivavy behovohoka ary avy hatrany dia naiditra eny Tsiafahy. Mainka koa ity tranga ity manamafy fa tena dahalo tanteraka i Botomena ary miparitaka manerana ny nosy ny tambajotrany. Mbola misy namany hafa izay karohina koa eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin’izao fotoana izao.